Okunye okunye: izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana okukwenziwe ekwelapheni
Kuzo zonke izitshalo zekhemisi ezisetshenziselwa imithi yabantu, kungenzeka ukuthi leli phendu lidume kakhulu. Noma kunjalo, bambalwa abantu abangabhala zonke izakhiwo zokwelapha zalesi sitshalo. Naphezu kokusetshenziswa okubanzi , izakhiwo eziningana eziwusizo kanye nezinkampani zokuphikisana ziyahlukaniswa ngokulinganayo.
Zonke izinyanga zasehlobo kukhona ukulandelana kwezimbali, kanti ekwindla isitshalo sikhula. Njengoba isitshalo esingenakuzithoba, sikhula nakwezinye izindawo ezingezansi zezulu ezikhona endaweni yeCIS (ngaphandle kwemibandela ye-Far North).
Emadlelweni, eduze kwemizimba yamanzi, kanye nasemahlathini amanzi futhi, empeleni, ensimini ungathola isitshalo esinjalo njengesicingo. Izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana naye kwakwazi abakhulu bomkhulu bethu. Ukusebenza engadini, uma unomzimba omncane engadini, hlola ngokucophelela esihlahleni. Kungenzeka ukuthi ukhula uthatha isitshalo esihle kakhulu. Zigcine ngokwakho okuhle. Umhlubuki uphenduka uphumelela kakhulu ezimweni eziningi. Yonke into ewusizo kakhulu esesitshalweni, inendawo yayo yokuhlushwa - iziqongqo zezihlumela.
Noma yiliphi i-herbalist elizihloniphayo elizokutshela ukuthi liwusizo kangakanani ukuphenduka. Izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana kwalesi sitshalo kulaba bantu baziwa ngokugcwele. Ngokuvamile lesi sipho semvelo sisetshenziselwa ukwelashwa kwezifo ezihlukahlukene zezingane, ikakhulukazi, isetshenziselwa ukuhlukumeza esikhumbeni somntwana. Ukwenza lokhu, uhlamba emgqeni wethambo. Kuyasiza ekwelapheni imikhuhlane, kuyasebenza njengendlela yokunciphisa ingcindezi. Ngezinhloso zezokwelapha, kokubili ngaphakathi nangaphandle kusetshenziselwa ngokulandelana kakhulu. Ukwelashwa nge-decoctions kanye nemigcobo emisiwe kunqunywe ngisho nongcweti.
Ngaphakathi kusetshenziselwa izifo ze-muscular and bone apparatus, isifo sikashukela, i-bronchitis, i-edema, ukubunjwa kwezinto eziphilayo kanye ne-cystitis. Futhi, i-decoction evela kwichungechunge inomphumela omuhle esibindi, isiza ukuyihlanza. Ngendlela ye-lotions lesi sitshalo sisetshenziswa ngaphandle ekwelapheni i-furunculosis, i- seborrhea, izilonda ne-diathesis.
Umhluzi ovela empandeni yokuphenduka unomphumela ohlukile we-antitoxic. Kulo mbono ukuthi lisetshenziselwa ukulunywa ngoporpion emazweni aseMpumalanga. Uma ungeziwe ku-decoction yamagqabi achotshoziwe wesitshalo, angasetshenziswa ngokulunywa kwezinyoka ezinobuthi. Amaqabunga amasha asetshenziselwa ukwelapha amanxeba.
Omunye umuthi omkhulu wokulwa ne-antiallergic yisona. Izakhiwo eziwusizo kanye nokuphikisana kwalesi sitshalo vumela ukuzisebenzisa ngisho nokwelashwa kwezinsana. Lesi esinye sezixazululo ezimbalwa zemvelo ukuthi, uma zilungiselelwe kahle, azibangeli imiphumela emibi.
Into eyinhloko lapho ulungiselela ukugcoba nezidakamizwa ubheka ukulinganisa: 1 isipuni ngasinye indebe yamanzi abilayo. Ngemuva kwalokho, faka amahora amathathu, ukuhlunga bese usebenzisa njengoba kuqondiswe. Ukuze ukwelashwa kube nekhwalithi ephezulu, kufanele kusetshenziswe utshani obusha kuphela. Uma ingatholakali, khumbula ukuthi impilo yesheluli yempendulo yemvelo akufanele idlule iminyaka emibili.
Ukuqeda izifo ezehlukene namuhla ungathola eziningi zokupheka. Ukulandelana, ngenxa yobuningi bama- tannins namafutha abalulekile ekubunjweni kwawo, isitshalo esisetshenziswa kakhulu kunazo zonke emithi nase-cosmetology.
Ubuhlungu emadolweni ngenkathi uhlakaza futhi umile. Ukwelashwa ngamakhambi omuntu
Izizathu ezingu-14 zokusebenzisa i-spirulina nsuku zonke
Ukusetshenziswa kwamafutha we-thistle ngobuhle nempilo
Ukwelashwa okuphumelelayo kwegciwane le-thyroid ekhaya
Ixhaphozi yaseSabelnik: ukuphikisana nokusebenza. Izakhiwo eziwusizo zesitshalo
Okudla "umzimba Omiswe" - imenyu amadoda abafisa ukuba lomzimba kanokusho
"I Rum Diary" ifilimu. Abalingisi kanye izindima
Kusukela lokho izifo kusiza tincture ulwandle lalesi sihlahla?
Ukudoba umugqa futhi esondweni kusilungisi: indlela yokwenza izinqumo ezinhle?
Thatha ucezu uhlobo umhlobiso ngesimo terrariums ezincane